Alpha Litebook, rinoyevedza kabhuku kubva Gnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Alpha Litebook, inoyevedza Gnu / Linux notibhuku
Kazhinji kana isu tichida kuve nelaptop neGnu / Linux, yakanakisa sarudzo ndeyekutenga laptop neWindows uye kutsiva iyo Microsoft system neiyo Gnu / Linux kugovera. Iyi ndiyo sarudzo inokwenenzverwa sezvo makomputa eApple anodhura kwazvo uye Windows 10 malaptop ane njodzi uye haana kuchengetedzeka.
Nekudaro, kune makambani akati wandei anovhura makomputa neGnu / Linux. Iwo malaptops kana desktops ayo akavakirwa akatenderedza Gnu / Linux-inoenderana Hardware kana kugovera. Pasina nguva refu tanga tichiziva muenzaniso we Slimbook asi kune vamwe vakaita seAlpha Litebook laptop.
Kambani yeLitebook yakagadzira laptop inotarisira ku uve dombo reApple macbook asi uine Mahara Software. Mune ino kesi Alpha Litebook ilaptop ine Elementary OS sehurongwa hwekushandisa huchiperekedzwa nemaapplication atinogona kushandisa muzuva redu zuva nezuva senge Google Chrome, Spotify kana WPS Hofisi.
Alpha Litebook ibhuku rekunyorera rine Elementary OS uye WPS Hofisi
Laptop yacho ine 14,1-inch screen ine resolution ye 1920 x 1080 pixels. Laptop's processor ndeye Intel quad core pa1,6 Ghz ine 4 Gb ye RAM. Iyo yekuchengetera yemukati inogona kuve 512 Gb nekutenda kune HDD kana 32 Gb nekutenda kune SDD.
Panyaya yekubatana, chishandiso chine maviri usb 3.0 chiteshi, rj-45 chiteshi, hdmi chiteshi, slot yemasd makadhi uye maikorofoni kuburitsa. Bhatiri reiyi laptop inopa kuzvimiririra kwemaawa anopfuura mapfumbamwe ayo anogona kuchinja zvichienderana nekushandisa kwatinoapa. Kurema kwechinhu ichi kwakafanana nemidziyo yechizvarwa ichangoburwa, isingadariki kilogiramu imwe yehuremu.
Asi iyo inonyanya kufadza pfungwa yeiyi Alpha Litebook mutengo wayo, unonakidza seyakatakura software. Laptop Laptop haipfuuri 240 euros, mutengo unodhura kwazvo wemidziyo iyi.
Alpha Litebook haipe chero chinhu chitsva chisina mimwe michina, asi chokwadi ndechekuti mutengo wayo unoita kuti laptop ive sarudzo inonakidza uye kunyangwe yakakwana kune avo vanoda laptop neGnu / Linux uye ubhadhare mari shoma yazvo Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Alpha Litebook, inoyevedza Gnu / Linux notibhuku
Ndingawanepi iko kuno kuMexico.
Rakafanana peji remabhuku rinotumira kwauri nemari yekuwedzera yekutumira, uye zvinoenderana neSAT kana iri laptop imwe haufanirwe kubhadhara mutero
Christian benitez akadaro
zvakada kufanana nesamsung ativ bhuku 9 lite
Pindura kuna Christian Benitez
Inopfuura mwedzi miviri kubva zvandakaraira uye ndikabhadhara iyo uye ini handina kuigamuchira kana kupindura iwo mameseji.
Maitiro ekuomesa pendrive kuburikidza neiyo Linux terminal